Halganka looga soo horjeeday Fayraska Fayraska Wadnaha wuxuu sii ahaanayaa Xawaare Deg Deg ah Ankara | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraHalganka looga soo horjeedo Cudurka Infekshannada ayaa ka sii socda Ankara
24 / 03 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, tareenka, SAWIRADA, GUUD, WADADA, KENTİÇİ Systems Rail, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, Metro, TURKEY
La dagaallanka faafitaanka cudurka 'coronavirus' wuxuu ka sii socdaa Ankara
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa dagaalka ay kula jirto cudurka faafa ee coronavirus. Duqa Magaalada Metro Mansur Yavaş wuxuu sheegay inay taageeri doonaan muwaadiniinta jirta 65 sano iyo wixii ka weyn, kuwaasoo ku baaqayay "HomeKal" bandowga ka dib.
Isaga oo la hadlaya muwaadiniinta 65 jirka ah iyo wixii ka weyn ee uu ku marayo akoonnada warbaahinta bulshada, Duqa Magaalada Yavaş wuxuu ku dhawaaqay in ay kiraysteen kaaliye wade mooto si ay uga shaqeeyaan 17 suuq iyo laamo, iyo in dhammaan baahiyaha muwaaddiniinta lagu soo daro baaxaddan la buuxin doono. ASKİ waxay u fulin doontaa nidaamka biyo-gelinta macaamiisha da 'ahaan jirta 65 iyo wixii ka weyn, ee leh mitirka biyaha leh kaarka, laga bilaabo Talaadada, Maarso 24. Kooxaha Dawladda Hoose ee Magaalada, oo u shaqeeya 7/24 caafimaadka dadweynaha, waxay maalinba maalinta ka dambaysa goobaha caamka ah iyo xarumaha dawladda iyo ururada, gaar ahaan gaadiidleyda dadweynaha.
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii waddaa dagaalka ay kula jirto cudurka dilaaga ah ee coronavirus iyadoon hoos loo dhigin.
Kordhinta dadaallada ka-hortagga jeermiska ee loogu talagalay caafimaadka bulshada, Dowladda Hoose ee Magaalooyinka waxay sidoo kale fulineysaa tallaabooyin cusub oo loogu talagalay baahiyaha muwaadiniinta. Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş ayaa bayaankiisa ku sheegay bayaankiisa warbaahinta bulshada in baahida maalinlaha ah ee suuqa ee muwaadiniinta jirta 65 sano iyo wixii ka weyn, oo bandow lagu soo rogay oo loogu yeerayo "HomeKal", waxaa lala kulmi doonaa wariyaasha mootooyinka ee ay kireysay Dowlada Hoose.
WAKAALADA MOTORCYCLE Kirey
Duqa magaalada Yavaş, oo la wadaagay liisaska 17 suuq iyo laamood oo ku yaal Ankara markii ugu horeysay, labadaba akoonkiisa warbaahinta bulshada iyo websaydhka Dowlada Hoose, ayaa lahadlay muwaadiniinta 65 jirka ah iyo kuwa ka weyn ereyada soo socda:
“Walaalahayowga qaaliga ah ee dalka, ugu horeeya, kulligiin u taga kulligiin. Waxaan rajeynayaa inaan si wadajir ah uga gudubno maalmahan xun. Sida la ogsoon yahay, bandoowgu wuxuu soo bandhigay da'da 65 sano iyo wixii ka weyn. Wadahadaladayada aan la leenahay silsiladaha suuqa ayaa sii wada si ay u buuxiyaan baahiyaha kuwa baahan. Dhawaan waxaan ku soo daabici doonaa dhamaantooda meesha ay ku sugan yihiin, macluumaadka cinwaanka, laanta iyo macluumaadka lala xiriirayo. Waxaad awoodi doontaa inaad si fudud u hesho waxaad rabto. Waxaan sidoo kale wadahadal la galnaa shirkadaha wax kala shaqeeya. Degmo ahaan, waxaan isku deyeynaa inaan kaa caawino baahiyahaaga. Waxqabadka degmada ee ku saabsan aagagga adeegga guriga ayaa wali sii socda. Intaa waxaa sii dheer, adeeggayaga cuntada kulul ayaa sii soconaya 20 oo qoys oo ku nool meel baahi liidata. Waxaan rajeynayaa inaad ka badbaadi doontid maalmahan xun ee aan waxyeello ah lahayn. Si wadajir ah ayaan u wada soconaynaa gacanteena. Dhammaantiin waan xushmeeyaa.
Waaxda Adeegyada Bulshada ee Dawladaha Hoose ee Magaaladu waxay bixin doontaa khidmadaha ergooyinka ku xiran Xiriirka Dhamaan Mootooyinka Mootooyinka. Ku shaqeynta fahamka degmada bulshada, Dowlada hoose ee Magaalada waxay adeegan lacag la’aan ah siineysaa muwaadiniinta 65 jirka ah iyo wixii ka sareeya, waxey kaloo ka hortageysaa adeegayaasha maalin walba keenaya mushaharka guryahooda nidaamkaan.
Çağdaş Yavuz, Gudoomiyaha Xiriirka Dhamaan Baabuurleyda Mootooyinka Anatolia, oo isugu yimid horteeda Dawlada Hoose ee Magaalada waxayna cadeeyeen inay diyaar u yihiin waajibaadka, ayaa yiri:
“Marka ugu horeysa, waxaan u adeegi doonnaa 100 ergey. Waxaan ku sii wadi doonnaa ergooyin dheeri ah iyadoo loo eegayo baahida kordheysa. Waxaan leennahay waajibaad ahaan federaale ahaan. Ilaa bandowga qayb ahaan ee muwaaddiniinta da'doodu tahay 65 iyo wixii ka weyn ee qaba cudurrada daba-dheeraada ay dhammaadaan, waxaan ka qaadi doonnaa cuntadooda iyo baahiyaha aasaasiga ah ee laga amro suuqyada inta u dhaxaysa 12.00-17.00. Waqtigan xaadirka ah, dhammaan maqaayadaha iyo cutubyadii waa la xirey, iyo ergooyinkeena gawaarida wadista sidoo kale shaqa la’aan ayey ahaayeen. Duqa Magaalada ayaa sidoo kale la wareegey xaaladdan oo uguyaraan ergooyinkeenu waxay heleen fursad ay maalin walba lacag ku qaataan guryahooda. Waxaan ku siinaynaa mahadnaq iyo mahad celinteena Madaxweynaheena. ”
Golaha Magaalada Ankara ayaa sidoo kale soo jiitay muhiimada ay leedahay wada shaqeynta udhaxeysa Ururka Isboortiga Baabuuriyada Anatolian, Ururka Suuqyada Maxalliga ah iyo Ururka Ganacsadayaasha, iyagoo uga mahadcelinaya taageerada isweydaarsiga mootooyinka ee Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimadda, halkaas oo loogu yeeray "HomeKal".
TAAGEERADA CUNTADA EE XAALADAHA EE XIDHIIDHKA
Ka dib markii laga mamnuucay waraaqaha aruurinta ee Magaaladda Caasimadda iyada oo la adeegsanayo la dagaalanka cudurka dilaaga ah ee coronavirus, taageero cunto ayaa la bilaabay in lagu bixiyo gobollada ay dadkani aad ugu noolyihiin awaamiirta Madaxweyne Yavaş.
Mustafa Koç, madaxa waaxda booliska degmada, wuxuu sheegay in ay ka fuliyeen meelaha lagu buufiyo aagga ay waraaqaha aruurinta kawada, ee ku nool aagga Şirindere ee degmada Çiğdem, ay ku yaalliin macluumaadka soo socda:
- Meeshani waa meel ay deggan yihiin qiyaastii 600 oo waraaqo ururiyayaal ah. Ururinta waraaqaha ayaa labaduba ah kooxda halista ugu weyn shaqsi ahaan isla markaana khatar weyn ku ah gudbinta iyo fiditaanka fayraska. Sababtaas awgeed, waxaan mamnuucnay aruurinta waraaqaha. Waxaan u quudinay ururinta waraaqaha sidii degmo. Waxaan abuurnay nidaam lagula kulmo raashinkooda qoysaskooda subaxa iyo fiidka maalin walba. Waxaan raashin u qeybineynaa qoysaskooda 5 qof oo ku nool 200 gobol oo kala duwan. Waxaan ka takhalusnaa aagga ay ku sugan yihiin iyo waraaqaha la soo uruuriyay maalin kasta. Sida laga soo xigtay saynisyahano, aagga ugu dheer ee fayrasku wuxuu ku yaal warqad. Ilaa aan ka helno xalka joogtada ah, waxaan ka hortegi doonnaa dhibaateynta waxaanna meesha ka saari doonnaa fiditaanka halista.
Abdülkadir Aşık, oo ka faa iidaystay cunnada gargaarka ah ee loo diyaariyey laguna qaybiyey Cunnada BELPA Cuisine, ayaa yidhi, "Hadda waraaqo u ururineyno fayraska awgiis. Qoys ahaan ayaa nalagu dhibaateeyey, laakiin degmadu aad ayey noogu fikirtay oo nagama aynaan dhigin gaajo iyo harraad. Aad ayaan ugu mahadcelinayaa dowladda hoose ee Magaaladda. ”Warqad kale oo aruurisa Ceylan Avcı ayaa tiri," Ma ururineyno xaashiyaha iyo xaashida mar dambe. Degmadu waxay noo keentaa cunno waxayna si joogto ah ugu buufiyaan gobolkan ”, ayaa u mahadcelisay Dowladda Hoose ee Magaaladda.
Seyfettin Aslan, Madaxa Waaxda Arimaha Caafimaadka, ayaa sidoo kale sheegay inay bilaabeen in ay jeermis dilaan 10 gobol oo xayawaanada darbijiifka ah ay quudin jireen iskaa wax u qabso mutadawiciinta jecelna ay ku yaalliin magaalada.
WAA IN AY U SAMEEYAAN 65-SANO AADAN OO GUURSAN KARSOONKA GURYAHA ASKI
Dawladda Hoose ee Magaalada, oo soo saartay talaabooyin cusub oo looga hortagayo halista cudurka faafa, ayaa bilaabi doonta inay biyo ku shubto mitirka kaararka macaamiisha deggan ee jira 65 sano iyo wixii ka dambeeya Talaadada, 24-ka Maarso.
Iyada oo qayb ka ah adeegga 65 sano jir iyo ka weyn ee macaamiishooda aan bixi karin ayaa isticmaali kara markii ay gaaraan Başkent 153 ama (0312) 616 10 00, kooxda ASKİ waxay ku fulin doonaan nidaamka biyo gelinta macaamiisha macaamiisha iyagoo isticmaalaya mitirka biyaha kaarka cinwaankooda.
ASKİ, oo ku wargaliya macaamiisheeda maalin walba farriimaha qoraalka (sms) iyo digniinta, kuna shaqeysa 24-saac, waxay go’aansatay inay dib u dhigto hannaanka xiritaanka macaamiisha deggan deegaanka cudurka daacuunka muddo 2 bilood ah. Agaasinka guud ee ASKİ, oo sii wadaya inuu biyo u furo 22 kun oo macaamiishooda guryaha ah oo hore u xiray biyahooda sababtoo ah deymaha aan la bixin, ayaa u beddelay nidaamka ballanka ee hawlgallada xarunta illaa iyo Maarso 23. macaamiishu www.aski.gov.t waa Ku dhawaaqista inaad ballan ka sameysan karto ASKI; Diiwaangelinta cusub, isbeddelka diiwaangelinta, diiwaangelinta dhismaha iyo hannaanka qaxitaanka rukumada, baajinta rukhsaynta, rafcaanka qaansheegta, beddelka counter (dalabka dalabka), baaritaanka qaan-sheegashada iyo macaamil bixinta ayaa sidoo kale lagu sameyn doonaa khadka tooska ah.
MUUQAALKA GAADIIDKA MASS EE WAA LAGU SAMEEYAA MAALIN WALBA
Waaxda Ilaalinta iyo Xakamaynta Deegaanka iyo kooxaha waaxda qaybta suuxinta ee magaalada, kuwaas oo ka fuliya hawlo kahortaga halista ah ee xarumaha dawladda iyo ururada magaalada oo dhan, ayaa maalin walba baabi'iya gaadiidka dadweynaha.
Iyada oo ay kooxaha Waaxyada Magaalada suuxinta ay ku nadiifinayaan agab gaar ah oo jeermis-dile ah gaar ahaan jidadka iyo wadooyinka waaweyn, gaar ahaan qalabka guryaha iyo joogsiyada, ANKARAY, Basaska Metro iyo EGO, tagaasida iyo basaska yar yar ayaa maalin walba la istcimaalaa iyada oo la raacayo awaamiirta Madaxweyne Yavaş.
Fatih Özden, oo ah ganacsade cufan ayaa yidhi, "Fayraskan dhibaato weyn ayuu ku yeeshay dhammaanteen waddanka oo dhan. Duqa Magaalada Mudane Mansur Yavaş wuxuu ka dhigaa gawaarida maalin walba in la jeermariyo. Gawaaridayadu nadaafadda ayey ku jiraan. Waxaan ugu mahad naqayaa anigoo ku hadlaya magaca dukaanleheena. Kahortaga baabuurteena maalin walba waa la sameeyaa, ”ayuu yidhi. Murat Karakoca wuxuu cadeeyay in kalsoonida shacabka ay korodhay taas oo ay ugu mahadcelineyso adeeggan Dowlada Hoose wuxuuna yiri, “Dadkeenu waxay ku raaci karaan gawaarida si badbaado leh. Waxaan uga mahadcelineynaa Degmadeena iyo Duqa Magaalada Mansur Yavas dadaalkooda. ”
Ku sii wadista habka ku-takri-falka dadka tagaasida ee K Stozılay Güvenpark Taksi Taksi, BELPLAS A.Ş. Dukaammada tagaasida ayaa u mahadcelinaya kooxaha nadaafadda waxay muujiyeen sida ay ugu qanacsan yihiin adeeggan sida soo socota:
Dursun Göloğlu: “Anaga oo ah darawal taksi, waxaan jeclaan laheyn inaan u mahadcelino Duqa Magaalada Ankara Mansur Yavaş. Gawaaridayada waxay u baahan yihiin in maalin kasta lagu buufiyo fayraska maalin walbana la buufiyo. ”
Ensari Güzelyurt: Waxaan rajeynayaa inaan ka gudbi doonno maalmahan. Aad ayaan ugu faraxsanahay adeeggan. Waxaan dooneynaa in maalin kasta loo sameeyo annaga iyo macaamiisheena labadaba. ”
Levent Altınok: Si aan ugu adeegno dadka Ankara sifiican, waxaan raacnaa oo taageersanahay go'aankaan ay qaateen bulshadeena iyo Dowlada Hoose ee Ankara. Waxaan isku dayeynaa inaan sameyno intii karaankeena ah ganacsade taksi si aan ugu adeegno dadka Ankara xaalad wanaagsan. Waxaan jeclaan lahaa inaan uga mahadceliyo Degmooyinka Magaalada Ankara ee Caasumada ah bixinta adeeggan. ”
Magaalada Caasimadda ah, oo fulisa jeermis joogto ah ayaa ka shaqeeya dhismayaasha isboortiga illaa dhismayaasha ururada aan dowliga ahayn, maxkamadaha, unugyada militariga, unugyada booliiska, dhismayaasha adeegga degmo, isbitaallada iyo xarumaha waaweyn, waxay hawlo nadiifin ah ka wadaan aaladda dabiiciga ah ee deegaanka dabiiciga ah ee Altğndağ ighnder xaafadaha iyo xaafadaha isku-darka oo ay muwaadiniinta Siiriya ku nool yihiin.
Turjumidda mashiinka dhagxaanta ee dhagxaanta ayaa sii socota
Dhismaha Isgaadhsiinta Sarre ee Soomaliya oo sii soconaya
Shaqada tareenka qaranka ayaa sii socota
Khadka tareenka BTK ayaa sii wadi doona hoos u dhaca inkastoo shaqada xilliga qaboobaha
Maalgelinta gaadiidka ee Istanbul ayaa sii socota
Meelaha loo yaqaan 'asfalt-ka' ee wadada woqooyiga ayaa sii socota
Asphalt Works ee Kayseri
Gaadiidka Gawaarida ee Altunordu
Dagaalka barafka ayaa sii socda Bursa